युगसम्बाद साप्ताहिक - मगन्ते सोच, स्वार्थी प्रवृत्ति र त्यागको अभाव - यादब देवकोटा
Monday, 04.06.2020, 01:32pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 03.23.2020, 09:07am (GMT+5.5)
विकास मागेर हैन, संघर्ष गरेर प्राप्त हुन्छ, समृद्धि एकल स्वार्थी सोचले हैन बहुजन हितायको सोचले मात्र प्राप्त हुन्छ अनि यी दुबै कुराका लागि चाहिन्छ त्याग । तर नेपालको सत्ता राजनीतिमा त्याग कुन चराको नाम हो पत्तो छैन ।
स्वाभिमानी सोच र त्यागी भावना हुने हो भने नेपाल विकसित मुलुक बन्न धेरै समय लाग्दैछ तर यही कुराको ठूलो अभाव छ । यस्तै अभाव देखिएको छ सरकारमा । आम अपेक्षा विपरीत सरकार गठन भएको दुई वर्ष नाघिसक्दा परम्परागत सोच, शैली र व्यवहारमा कुनै भिन्नता आएन । विकास निर्माणका काम पहिले जस्तो थियो त्यस्तै देखियो । निरन्तर भैरहने विकास बाहेक तीब्र विकासको संकेत समेत पाइएन । सरकारले जतिसुकै विकास गरेको दावी गरे पनि देख्ने आँखा भने सरकार पक्षधर बाहेक अरु भएनन् । नेपालको अहिलेको दुरावस्थामा पुग्नको कारण स्रोत नभएर हैन, सोच नभएर हो ।
नेपाल गरीब हो कि गरीब बनाइएको हो ? नेपाल सम्पन्न हुनसक्ने मुलुक हो कि हैन ?? यो प्रश्न यो पुस्ताले हजुरबा पुस्तादेखिका राजनीतिक नेताहरुलाई सोध्ने गर्दछन् । चार दशकअघि नेपाल धानचामल निर्यात गर्ने मुलुक थियो । विकास क्षेत्रपिच्छे राइस मिल खुलेका थिए । अहिले नेपाल चामल आयात गर्ने र अनुदानमा खाने मुलुक बनेको छ । भएका उद्योगधन्दा निजीकरण र उदारीकरणको नाममा बेचिए, भारतको एकलौटी बजार बन्यो । व्यापार घाटा चौपट छ युवा निर्यात गरेर बस्तु आयात भैरहेको छ ।
नेपाललाई अपार स्रोत–साधन प्रकृतिले दिएको छ, तर हामी ती स्रोतको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । यसका लागि इमान्दार, योग्य र जनमुखी छवि बनाएकाहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आफन्तको मोह नेताहरुले त्याग्नैपर्छ । राजनीतिमा त्याग गर्न सकिएन भने मुलुक बन्दैन र त्यस्तो त्याग गर्न नसक्ने नेता मुलुकका लागि बोझ मात्र हुनेछन् । यो देशमा योग्यहरुको कमी छैन, कमी छ त योग्य देख्ने आँखाको । आफ्नो नजिकको भए जो पनि योग्य र अर्कोको भए योग्य पनि अयोग्य देख्ने परिपाटीले गर्दा देशको समृद्धिमा योगदान दिने निकायमा विज्ञ हैन पार्टीका कार्यकर्ता लगिए । कार्यकर्ता पनि कस्ता लगिए भने देश र जनताको कामभन्दा नेताको निर्देशन बढी पालना गर्ने लगिए । यसको परिणाम विकास निर्माणको काम शून्य । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुने आशमा नेकपालाई प्रचण्ड बहुमत दिएका हुन् । यो बहुमतको कदर भएन । समृद्धि, सुशासन, स्थिरता र विकासको नारा घन्काएर नेकपालचुे चुनाव जितेको हो । तर यही सरकारका पालामा अर्बौं अर्बको भ्रष्टाचारका काण्ड मच्चिएका छन् ।
सफलता पदमा पुगेर मात्र अनुभूति हुने हैन । मात्र सकारात्मक नतिजा ल्याउने दृढतापूर्वक उच्च नैतिकबलका साथ काम गर्ने हो भने व्यक्ति यसै सफल हुन्छ उसंगै देश पनि सफल हुन्छ । आज देशमा यसैको अभाव छ । कुनै पनि नीतिलाई सही मार्गमा र्डोयाउने प्रमुख नीतिका वाहक वा चालकहरुले नैतिकता र इमान देखाउन सकेनन् भने त्यो देशको अवस्था कस्तो हुन्छ हामीले भोगिरहेका छौं । आज नेपालमा सबथोक भएर विकास नहुनुको पहिलो कारण यही हो । यहाँको स्रोत, साधन र सीपको प्रयोग गर्नुको साटो इमान र नैतिकहिनताको प्रयोग बढ्न थाल्यो । सबै नीतिहरु संचालन गर्ने राजनीतिमा इमान र नैतिकताको खडेरीको परिणाम समाज हरक्षण पतनको दिशातिर उन्मुख छ । मर्यादा के हो, माया केहो, सहानुभूति के हो, सम्वेदना के हो । अनि मानव हुनुको अर्थ के हो भन्ने नै बिर्सेर व्यक्ति चाहे राजनीतिक तहको जिम्मेवारी लिएका हुन वा बेकामे सबैमा एकलकाँटे स्वभाव विकसित भैरहेको छ ।
एउटा कुरा पक्का छ– यदि कोही व्यक्ति इमान्दार र नैतिकवान छैन भने ऊ जीवनमा सफल हुनै सक्दैन । इमान र नैतिकता गुमाएर केही समय सफल भएको जस्तो देखिएला, तर त्यो दीर्घकालीन हुँदैन । खासमा इमान र नैतिकताले नै व्यक्तिको वास्तविक चरित्र प्रदर्शन गर्दछ । अर्को सत्य के हो भने इमान र नैतिकवान व्यक्तिलाई सफलताको स्वाद चाख्न केही समय भने लाग्छ र जव ऊ सफल हुन्छ तव कहिल्यै पछिफर्कनु पर्दैन । त्यो सफलता दीर्घकालीन हुन्छ र उसले आफूसंगै आफ्ना पिता, पुर्खाको प्रतिष्ठा बढाउँछ भने भविष्यका सन्ततिका लागि एउटा सच्चा मार्ग्निर्देश गर्दछ ।
आज देशभक्तिपूर्ण इमान भएको नेतृत्व मुलुकले खोजिरहेको छ । जसले देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गरी मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डो¥याउन सकोस् । हामी कहिलेसम्म सबैथोक भएर पनि गरीब र मगन्तेका रुपमा मात्रै बसिरहने ।
वैज्ञानिकहरुले भेउ नपाएको एउटा सम्भावना - यादब देवकोटा (02.12.2020)
विदेशीले माया गरेर सहायता दिने हैन - यादब देवकोटा (01.14.2020)
देशले खोजेको छ एक राजनेता - यादब देवकोटा (12.17.2019)
अरुको इशारामा त पशुले पनि नृत्य गर्छ - यादब देवकोटा (11.27.2019)
राष्ट्रिय एकता कायम रहोस्- यादब देवकोटा (11.14.2019)
यस्तो अपेक्षा थिएन एनआरएनहरुसंग - यादब देवकोटा (10.22.2019)